Ahụike: bingeing chụpụrụ site dopamine | Ụgwọ Ọrụ Ụgwọ
Home Health Iguzozi na ahaghị nhata
Ahụ na-achọ nhazi iji nọgide na-arụ ọrụ ike ma na-edebe usoro ya niile. N'ime usoro ọ bụla a na-akpọ usoro a homeostasis. Dị ka ihe atụ, ndị okenye chọrọ ihi ụra awa isii na ụma kwa abalị yana ndị toro eto chọrọ karịa. Ha chọrọ ihi ụra iji nyere ụbụrụ na ahụ aka weghachi onwe ya, mezie nrụzi ọ bụla, mee ka ncheta dị ike ma gwọọ ya. Ahụ na-eme ka ọ̀tụ̀tụ̀ shuga dị n'ọbara dị, ọ̀tụ̀tụ̀ ọbara na mmiri na-arụ mgbe nile n'ụzọ dị warara. Mgbe ọtụtụ usoro na-ekwurịta okwu ma na-achịkwa n'etiti onwe ha iji mee ka nguzozi na imeghari ka ọnọdụ gbanwere, a na-akpọ usoro ahụ allostasis. Ọ bụ usoro nkwụsi ike karịa, na-achịkwa ọtụtụ usoro n'otu oge.
Ihe na-eme na oke, obere ma ọ bụ naanị ọkwa ziri ezi nke dopamine.
Anyị nwere ike ịnweta 'ụgwọ ọrụ' nri ma ọ bụ mmekọahụ. Mgbe anyị zuola iji gboo mkpa anụ ahụ anyị, ụbụrụ anyị na-ezipụ ihe mgbaàmà na-agwa anyị ka anyị kwụsị. Mgbe ahụ, anyị nwere ike ịnweta ọrụ ndị ọzọ dị mkpa maka ndụ kwa ụbọchị. Ọ bụrụ na anyị eleghara akara anya ma na-aga n'ihu, anyị nwere ike ịtụpụ ahụ anyị n'eleghị anya. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị 'na-agbanye' n'ụdị ma ọ bụ n'omume, a ga-ejigide usoro satiation ruo nwa oge. A na-emechi ihe na-egbuke egbuke. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ụbụrụ anyị nwere ike ịmalite ịkọwa bingeing dịka mkpa 'ịlanarị'. Mgbe ahụ, ọ ga-ekwe ka anyị nọgide na-etinye onwe anyị n'ọnọdụ nwa oge. Were anya anụ ọhịa bea tupu ya agbao oyi maka oyi mgbe ọ nwere ike ilo salmon 20 n'oge na-enweghị ọrịa. Ma ọ bụ tụlee oge ịlụ oge na oge uto mgbe ụmụ anụmanụ ga-achọ ịkwaba ọtụtụ di na nwunye dị ka o kwere mee.
Oge egwu anaghị agwụ agwụ
Igwe foto ndị na-egosi n'Internet na-egosi ụbụrụ dị ka oge oge mgbakọ, ma oge nke oge na-adịghị agwụ agwụ. Cheta ụbụrụ oge ochie anyị malitere n'oge oge ụkọ. Ụbụrụ oge ochie ahụ na-ahụ porn porn dị ka 'nri nsị'. Ọ bụ nnukwu ohere ịkọ fatịlaịza, nke na-eme ka anyị 'nweta ya mgbe ọ na-adị mma'. Na ụbụrụ mgbe nile, ụbụrụ na-asụgharị ụda na-ahụtụbeghị ahụmahụ dị ka mkpa dị ndụ. Ngwa ngwa, ọ ga-achọ ime mgbanwe site na ịgbanwere usoro mgbochi nke ụbụrụ.
Ụlọ ọrụ Intanet na-eji nchọpụta sayensị kachasị mma mee ka ọdịdị anụ ahụ na-eme ka anyị na-ekiri. Lee nke a Okwu TED site Nir Eyal.
Anyị lekwasịrị anya bụ ụdị azụmahịa nke internet dị ka Sir Tim Berners Lee, bụ nna nke ụwa dum. Uru ya na ndị na-akpọsa ngwá ahịa dị ka ọla edo. Enweghị ihe dịka egwuregwu ma ọ bụ vidiyo n'efu na ịntanetị. Oge ọ bụla anyị pịa 'dị' na mgbasa ozi ọha ma ọ bụ na-ekiri vidiyo ọhụrụ, ọtụtụ narị ụlọ ọrụ na-anakọta data ahụ ma na-ewuru anyị profaịlụ. Ka anyị na-ejikarị ịntanetị, ha na-etinyekwu ego ndị mgbasa ozi na-esi n'aka anyị. Ịṅụ ọgwụ ọjọọ pụtara na anyị enwechaghị uche na ike ụbụrụ dịnụ iji mụta nkà, mee ego anyị ma ọ bụ rụọ ọrụ.
Mmetụta Uche >>